Nhau - Sunglasses nzira dzekuchengetedza
Nzira dzekuchengetedza magirazi egirazi
Mushure mekutenga magirazi ezuva, pane zvisingawanzo teerera kune ekuchengetedza magirazi ezuva. Pamwe vamwe vanhu vanofunga kuti ini ndinongozvipfeka zhizha rino, uye vanhu vazhinji vanofunga kuti ivo vanotenga magirazi ezuva chete kuti vadzivirire kubva kumagetsi e-ultraviolet uye fashoni. Kana ari mamwe magirazi ezuva, ivo havazozvifunge. Muchokwadi, kana magirazi ezuva Iye anowanzo kuve akazara, uye basa rawo rinenge rashaiswa simba nekufamba kwenguva. Kwete chete iyo isingazokwanise kurwisa ultraviolet mwaranzi, inogona zvakare kukonzera ako maziso ezvehutano matambudziko.
Kugadziriswa kwemagirazi ezuva kwakada kufanana nemagirazi akajairwa. Iye zvino ngatitarisei maitiro ekuchengetedza magirazi ezuva.
1. Kana iyo lens ine mavara, girizi kana zvigunwe zvemunwe, shandisa jira rakapfava rekotoni mune akakosha magirazi ezvekushandisa kupukuta guruva kana tsvina pane lens. Usambofa wakashandisa zvipikiri kana zvigadzirwa zvine makemikari zvigadzirwa kubvisa mavara pane izvo lens
2. Kana dzikasapfeka, dzinofanirwa kubviswa zvakanaka uye kupukutwa zvakanaka. Paunenge uchiisa, tanga wapeta tembere yekuruboshwe (tora iyo yekupfeka seyakajairwa), isa girazi kumeso, ndokuputira nejira rekuchenesa lens, woisa muhombodo yakasarudzika. Chenjerera kudzivirira lens uye furemu kubva mukukweshwa nezvinhu zvakaomarara kana kusvinwa kwenguva refu.
3. Kurambidza kusvibiswa kwenguva yakareba kumvura, kunyura mumvura, uye kuisa panzvimbo yakatarwa kuti ubudiswe nechiedza chezuva; kugara kwenguva refu kumagetsi kana simbi kunorambidzwa
4. Tarisa zvakare kunzvimbo uko mafuta nebvudzi rakaputsika zviri nyore kuunganidza, senge tembere nemapedhi emhino. Rangarira, usageze nemvura inopisa kana kuiisa munzvimbo ine hunyoro.
5. Zvakare zvakare kuomadza furemu kana uchitora magirazi neruoko rumwe.
6. Kana iyo furema yakaremara kana kusagadzikana kupfeka, enda kuchitoro chemaziso kunopemberera kugadzirisa kwehunyanzvi.
Chengetedza zvakanyanya kutarisirwa kwemasikati, kuitira kuti magirazi ezuva agone kunyatso chengetedzwa, uye magirazi ezuva anogona kuchengetedzwa zvirinani.
Post nguva: Aug-18-2020